Ogaden News Agency (ONA) – Ceebtii ka raacday iyo Calaf la’aanta uu kala tagay MELES
Ceebtii ka raacday iyo Calaf la’aanta uu kala tagay MELES
Dawladaha ugu xoogga badan Adduunka si awooddooda dhaqaale iyo tan ciidan u sii adkaato waxay Dawlad kasta ku dadaashaa sidii ay xayndaabkeeda u soo galin lahayd Dalalka ugu badan ayadoo la adeegsanayo xeelado kala duwan. Si qorshahooda gaarka ah ay u fushadaan waxay Dawladaha xoogga badan qabtaan shirar ay ugu magac daraan “caalami” shirarka noocan ah sida kan “G8” ee hadda ka dhacay xerada “Camp David” waxaa lagu marti qaadaa goob joogayaal ka soo jeeda Dalalka iyo Gobollada ay qorshaysteen sida “Meles Zenawi” ayaga oo dareensan inay magac iyo sumcad ku leeyihiin meesha ay ka soo jeedaan, iyo inay siyaasadahooda ka dhex fulin karaan gobollada iyo Dalalka loogu talagay inay matalaan.
Shir sannadeedka ay ku kulmaan Dawladaha loo yaqaanno G8 oo sannadkan ka dhacay Maraykanka waxaa markay laba toddobaad ka hadhsantahay xilligii loo qabtay la baddalay goobtii loo asteeyay oo ahayd Chicago si looga hortago mudaharaadyo khalkhal galiya shirka, Meles oo shirkan Daawade ahaan loogu marti qaaday iyo Dawladda Marayku waxay filayeen in Mudaaharaadyadii lala rabay Chicago aynan ka dhacaynnin Camp David oo ah xero Ciidan kana fog meelahay ku noolyihiin dadka la filayay inay mudaaharaadaan. Hasa ahaatee lagama baxsannin wixii laga cararayay waxaana gilgilay hareeraha Camp David Mudaaharaadyo aan horay uga dhicin Dalkan Maraykanka, waxaana soo jiitay dareenka dadka ku nool Ameerika Jaaliyadaha Ogadenia ee ku nool Maraykanka oo aad u tira badnaa si cadho iyo xamaasadi ku jirtana uga soo horjeeday imaatinka uu Meles yimid Maraykanka, Mudaaharaadka oo lagu soo bandhigay xasuuqa iyo xadgudubyada ay gaysato xukuumadda Addis Ababa waxay Meles ku noqotay sheekareeb uga daran Ceebtii ka raacday yurub sannadkii la soo dhaafay.
Mudaaharaadyadan ka cabaadiyay Meles waxaa barbar socday dacwado iyo qoraallo lagaga hadlayo danbiyada ay gaysato xukuumadda Addis Ababa. Arrimahaas aan kor ku soo sheegnay oo is biirsaday waxay wax ka baddashay aragtidii Reer Galbeedku ka qabeen Meles ayaga oo garwaaqsaday inay ku khasaareen waxayna billaabeen inay siyaabo kala duwan wax uga qoraan danbiyada iyo xasuuqa uu ka gaystay Geeska Afrika qaarna waxayba goosteen ama dhimeen dhaqaalihii ay siin jireen.
Dawladaha horumaray ee Reer Galbeedka ayaa labaatankii sano ee u danbeeyay gaar ahaan wixii ka dambeeyay 9/11 waxay aad u buun-buuniyeen Meles Zanawi iyagoo ka taageeray xagga dhaqaalaha, siyaasadda iyo ciidanka. Waxaa kale oo loo qorsheeyay inuu noqdo masuulka Afrika u matala Shirarka Caalamiga ah. Taageeradii hagar la’aanta ahayd ee Meles uu ka helayay Dawladaha Horumaray waxuu u adeegsaday xintan iyo colaad Afrika dhexdeeda ah gaar ahaan Geeska Afrika. Siyaasadaha Meles ee jaahwareerka ku salaysan waxaa ka horyimid inta badan dawladaha Afrika oo u arkay in Afrika iskaba daaye uusan Ethiopia matali karin. Waxaa taa wehelisay isaga oo faragaliyay danaha dawlado Afrikaan ah oo ka awood badan sida Masar, Kenya iyo South Africa. Xiisadahaa ay abuureen dawladaha reer Galbeedka iyo shirarka Caalamiga ah ee loogu yeedhayo Meles Zinawi waxaa si xoog leh uga hor yimid Qaaradda Afrika oo xiriirkoodii u jeediyay Xagga Bariga sida China, Turkiga, Iiraan iyo India waxaana si lama filaan ah hoos ugu dhacay dhaqaalihii Reer Galbeedka ee ay rabeen in la bulaaliyo.
Taageerda faraha badan la siiyay Meles Zinawi, kaalmada hayadaha samafalka iyo Hantida ka soo gasha dhulalka uu kireeyo ama uu iibiyo waxuu u adeegsaday KT Meles Zinawi Xasuuqa, Barakicinta iyo isku diridda dadka ku dhaqan Geeska Afrika gaar ahaan Somalida Ogadenia isaga oo ku tala galay inuu gabi ahaanba tirtiro dawladaha qaarkood. Dhibaatadan baahsan ee ku habsatay Geeska Afrika waxaa ka dhashay qax farabadan iyo qaylo dheer oo u tallawday daafaha adduunka, waxaana dibadaha ka billawday mudaaharaadyo lala beegsanayo shirarka iyo kulamada ay ka qayb galaan Meles iyo Maamulkiisa.
Faallooyinka iyo qoraallada saxaafadda Maraykanka waxay billaabeen inay si horleh uga hadlaan siyaasadaha Reer Galbeedka gaar ahaan tan Maraykanka ee ku aaddan Afrika, ayagoo si aad ah u dhaliilaya Taageerada ay siiyaan Afrika oon wax horumar ah keenin, iyo khayraadka Afrika oo looga dheereeyay. Haddaba Maraykanka oo laga sugayay inay wax ka beddelaan siyaasadaha ku aaddan Afrika waxaa la is waydiinayaa waxa ka soo bixi doona, dhanka kale Meles oo maalinba maalinta ka danbaysa ku ceeboobaya fagaare kasta oo la isugu yimaaddo aan wada daawanno dharbaaxada iyo kashifaadda maanta ka raacday Camp David eelka ay reebto iyo wixii ka soo baxa.